သစ္စာနီ| January 23, 2013 | Hits:5,053
| | အင်တာနက်တွင် ပေါင်မုန့်ဖုတ်နည်း က အစ နျူကလီးယားဗုံး လုပ်နည်း အထိ အလွယ်တကူ ရှာဖွေလို့ ရသည် (ဓာတ်ပုံ- Reuters)
Ahon January 23, 2013 - 11:54 pm i love irrawaddy
Reply Nwar Kyaungthar January 24, 2013 - 3:20 am I do not blame you. Even Than Shwe is dancing around when he got his first mobile phone with internet connection yesterday. He ruled us and disconnected us from outside world his entire rule but he himself is enjoying internet yesterday. Kyaing Kyaing did not know why he danced and jumped around but she later found out that he hadanew mobile phone with internet connection. Even dictators do enjoy freedom which they do not let the people enjoy for their own selfish power.
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 24, 2013 - 3:40 am အင်တာနက်ကတော့ အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးရေးသူ ပြောသလို အင်တာနက်ကနေ ဗဟုသုတ ရစရာ ၊ လေ့လာသင်ကြားစရာ၊ ဖတ်ရှုစရာ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကတော့ အပျော်တမ်း အပျင်းပြေဆိုသလို ရပ်ဝေးက မိတ်ဆွေတွေ၊ ရပ်နီးပေမယ့် သူ့ကိစ္စ ကိုယ့်ကိစ္စတွေနဲ့ တွေ့ဘို့ ဆုံဘို့ မလွယ်သူ မိတ်ဆွေ သုငယ်ချင်း၊ မိသားစုဝင်တွေ ဆက်သွယ်ဘို့ ကောင်းတဲ့နေရာပါ။ ဒါပေမယ့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကနေ ဘာမှ ပညာတိုးစရာ မရှိပါဘူး။ တယောက်ယောက်က သင့်တော်လို့၊ သိစေချင်လို့ ရှယ်တာလောက်ပဲ သိနိုင် ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ သူများတကာ တင်သမျှပုံ၊ ချက်သမျှဟင်းတွေ လိုက်သရေယိုနေရင်တော့ အချိန်ကုန် အကျိုးမရှိပါ။ ဒါကြောင့် အန်တီစုက မသုံးတာ၊ အိုဘားမား သူ့သမီးတွေကို ပေးမသုံးတာ ဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်မပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲ ဖေ့စ်ဘွခ်ကို တနေ့ တနာရီပဲ ပေးသုံးတဲ့ စည်းမျဉ်း ထုတ်ထားတဲ့ မိဘတွေ ရှိပါတယ်။ အင်တာနက် သုံးတာ ခေတ်နဲ့ အမီ လိုက်နိုင်သလို အသိဥာဏ် တိုးတက်မှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ Facebook သုံးတာကတော့ သူများအကြောင်း သောင်းပြောင်းထွေလာ အတင်းကမ္ဘာမှာ အမီ လိုက်နိုင်ပြီး အချိန် ဖြုန်းလိုသူတွေအတွက် အကျိုးရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး ကွန်ပြူတာ နောက်ကွယ်ကနေ လက်သီးပုန်း ထိုးလိုသူ သူရဲဘောကြောင်သူ နာမည်ဝှက်ပိုင်ရှင်တွေ အတွက် အကောင်းဆုံး စားကျက်ဖြစ်ပါတယ်။